Surf chikamu neiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus | Ndinobva mac
Yakafananidzwa | | Noticias, Rumo
Vhidhiyo yazvino ichitarisa yakanakisa Kai Lenny inosanganisa zviviri zvezvinhu zvandinofarira zvakanyanya pasirese. Chekupedzisira Apple teknolojia uye kufambisa. Kune avo vedu vadikani veApple, zvaiita senge munhu anogona kukwanisa kupinda mumvura nechimwe chezvigadzirwa zvavo. Chekutanga pane zvese zvinofanirwa kuve pachena kuti iyo iPhone 7 haisi yemvura. Iyo smartphone inoshora kupenya, uye mvura asi kusvika padanho.
Muvhidhiyo yekupedzisira Lenny, mukubatana nekambani yeinishuwarenzi yezvigadzirwa zvemagetsi Kutengeserana Kwenzvimbo, ita surf bvunzo kune yazvino iPhone mamodheru. Vhidhiyo inotanga na bvunzo yemaminetsi gumi kune iyo iPhone 10S, mairi isingabude zvakanaka. Mushure mekudonha kwakati wandei, kutendeuka uye kufambisa, iyo iPhone 6S inobuda mumvura yakagadzirira kupaza.
1 Iyo itsva iPhone 7 inosiya Surfari naKai Lenny
2 Iwe waizoshandisa iyo iPhone 7 sechiito kamera.
Iyo itsva iPhone 7 inosiya Surfari naKai Lenny
Pakangoputsika iyo iPhone 6S, yaive nguva yake tendeukira ku6S Uyezve. Uye sekutarisirwa, mhedzisiro yacho yaive yakafanana. Mushure memaminitsi gumi echikamu chekusvetuka, iyo iPhone 10S Plus inopera senge mukoma wayo mudiki, akanyura. Hazvishamisi USA?. Isu tinoziva kuti zviteshi izvi hazvina kugadzirirwa kurwisa mvura, ndoda kufambisa. Tevere, kwaive kuchinjika kweiyo nyowani iPhone 7. Iyo nyowani Apple terminal yaziviswa seisina mvura. Asi kusagadzikana kwemvura uku kune mamwe ma nuances.
Iko kutendeuka kweitsva. Iyo iPhone 7 inotora "bhati" kwehafu yeawa naKai Lenny. Katatu nguva yeaviri apfuura. Izvo zvinoda kuziva uye zvinonakidza kuona kuti sei Lenny paanofashura iye ane mimhanzi pane yake iPhone. Kugadzira imba brand twists, iyo iPhone inoita kunge isingatambure zvakanyanya. Mimhanzi inoenderera ichiridza kunyangwe pasi pemvura. Uye pakupedzisira, iko kutendeuka kweiyo iPhone 7 Plus. Kunge munin'ina wake, anotsungirira musangano wemaminetsi makumi matatu naLenny. Asi mune iyi kesi zvinoita sekunge mimhanzi inomira.
Mhedziso anokunda bvunzo ye surf yave iri iPhone 7. Yakagara hafu yeawa mumvura. Izvo hazvina chete kuramba splashes. Akashambadzira neimwe yemakuru uye akamuperekedza munzira dzese. Yakanyudzwa nguva dzisingaverengeke. Uye zvaita zvese izvi zvichiridza mumhanzi. Chokwadi zvinoshamisa. Kune vanoda mitambo yemvura vhidhiyo iyi inogona kunge iri imwe yekukurudzira kufunga nezve kutenga iyo iPhone.
Iwe waizoshandisa iyo iPhone 7 sechiito kamera.
Asi Iko iPhone 7 yakanaka sarudzo seyekuita kamera?. Zviri pachena kuti iyo kamera inofambidzana neiyo nyowani iPhone 7 Iko parizvino ndeimwe yeakanakisa pamusika. Hapana anopokana nehunhu hwepfuti dzake. Iyo resolution inonakidza, uye kupinza uye mwenje zvinokodzera chero nyanzvi kamera. Asi kubva ipapo kuenda kunofungidzirwa sarudzo ye «chiito cam» inoenda yakakosha nhanho.
Muvhidhiyo tinoona kuti iyo iPhone yakanyatsobatirirwa kune surfboard. Asi ichiri chakanamatira epurasitiki chinotsigisa. ¿Ungashinga kupinda mumvura ne "800 euro kifaa" pasina mamwe matanho ekudzivirira? Uye iyi haisi imwe yezvikanganiso zvakakura. Vaya vedu vakashandisa iyo inozivikanwa GoPro vanoziva zvezvakawanda zvishongedzo zviripo pamutambo wega wega. Uye zvechokwadi, chigadzirwa chakakura kudaro, uye panguva imwechete chisina kusimba, hachiite senge chinoshanda munzvimbo ino.
Muchidimbu, zvakanaka chaizvo kuti iyo iPhone inoshanduka yakanangana nekupokana kukuru nemvura. Uye kuona Apple "gadjet" kukwira mafungu kunonakidza. Iyi ichave iri nhanho yekutanga kuenda kune Apple chiito cam?. Chaive chokwadi chekugamuchirwa zvakanaka muchikamu chemitambo. Apple ine tekinoroji uye nzira dzekuzviita. Asi parizvino isu tinogadzikana nekugona kuve padyo nemvura tisingatyi mafoni edu. Zvichakadaro, sekutaura kwaKai Lenny pakupera kwevhidhiyo: "IPhone 7 inodzivirira mvura, asi hapana humbowo hwemvura".
Nakidzwa pano rakakura vhidhiyo rekutanga kweiyo iPhone munyika yekufambisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Surf chikamu neiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
Apple inopemberera kuvhurwa kukuru kweApple Chitoro chekutanga muMexico